China EPP Cooler Box စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Huizhou
EPP cooler box သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ် EPS cooler box နှင့်အလားတူအလားအလာရှိပြီး၊ ပိုကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြှုပ်ပစ္စည်းအသစ်တစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ EPS လုပ်သကဲ့သို့မြှုပ်အမှုန်များမပျံသန်းဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာအစားအစာအဆင့်နဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတယ်။
EPP (Expanded Polypropylene) Cooler Box
1.EPP cooler box သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် EPS cooler box နှင့်အလားတူအလားအလာရှိပြီး၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော foam ပစ္စည်းအမျိုးအစားသစ်တစ်ခုနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ EPS လုပ်သကဲ့သို့အမြှုပ်အမှုန်များမပျံသန်းဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာအစားအစာအဆင့်နဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်နဲ့သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတယ်။
2.EPP.ie တိုးချဲ့ထားသောပိုလီပိုလီဖလင်းသည်မကြာသေးမီကမြန်ဆန်စွာတီထွင်ထားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသော၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်ရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအပူစီးကူးမှုရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလွယ်တကူပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်နှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအကောင်းဆုံးကြားခံကာကွယ်မှုပေးပြီးသေတ္တာအတွင်းရှိတည်ငြိမ်သောအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအကြိမ်ကြိမ် အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုပြီးနောက်ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှလွဲလျှင်၎င်းတို့သည်တိုက်မိခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရန်၊ များသောအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာ၊
1.EPP cooler box သည်ထုတ်ကုန်များကိုကွန်တိန်နာအနေဖြင့်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုအအေးနှင့်ပူသောလေထုဖလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၂။ လတ်ဆတ်သောအစားအစာလယ်ကွင်းများအတွက်၎င်းတို့သည်အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများ၊ အေးခဲသည့်အစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံး၊ ပန်း၊ နို့နှင့်အစရှိသဖြင့်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်ပီဇာသေတ္တာများစွာပို့ဆောင်ရန်လူကြိုက်များလာသည်။
ဆေးဝါးများတင်ပို့ခြင်းအတွက်အေးခဲသေတ္တာများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတုဗေဒဓါတ်ကူပစ္စည်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနမူနာများ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသမှုဆေးဝါး၊ ပလာစမာ၊ ကာကွယ်ဆေးအစရှိသည်တို့ကိုလွှဲပြောင်းရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤအခြေအနေတွင်အပူချိန်မော်နီတာလိုအပ်သည်။
4. တချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့သည်အလင်းရောင်၊ တိုက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်စခန်းချခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ လှေလှော်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းများတွင်အစားအစာများနှင့်အချိုရည်များကိုအအေးခံထားသည့်အတွက်ဂျယ်လ်ရေခဲပြင်အိတ်သို့မဟုတ်ရေခဲအုတ်များနှင့်အတူပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းပါသည်။ သန့်ရှင်းစေ။
5. ဖောက်သည်များကပိုသေးငယ်တဲ့ရောင်စုံ EPP box လေးကိုသူတို့ရဲ့လက်ပတ်နာရီလိုမျိုးထုတ်ကုန်တွေအတွက်တောင်းနေကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဆင့်မြင့်၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့အတူ။
အလျား * အကျယ် * အမြင့်
5.Nice ပုံသဏ္andာန်နှင့် high-end ကြည့်ရှုသည်
1.EPP cooler box ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ် အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးတွင်အသုံးပြုပြီးနောက်ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
5. Customized ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
ရှေ့သို့ VIP Cooler Box
နောက်တစ်ခု: ပလပ်စတစ် Cooler Box ကို